FUNNY Archives - Padaethar
ဆရာ့အိပ်ခန်းထဲ ၀င်မိသွားတဲ့ တပည့်မလေး အဖြစ်…
January 18, 2021 by Padaethar
မိအေး တဟင့်ဟင့်ရှိုက်နေလေသည်..။ မျက်ရည်များစိမ့်ဖြာဝေ့ဝဲ၍ဘဝကိုအစားခံလိုက်ရသလို..တလှိုက်လှိုက်ဖိုငင်နေသည်။ “သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” မိအေး ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ခါရမ်းနေလေသည်။ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မြသစ် ခြေမကိုင်လက်မကိုင် မိဖြစ်နေလေသည်..။တောသူတောင်သား.. ရိုးသားတဲ့သူတို့သားအမိလေးမှာ..အခုလို. ကြမ္မာငင်လာရတယ်လို့..။ “ဒီမှာ မိအေး ညည်းဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး.. ကာယကံရှင်ကဘာတဲ့လဲ ညည်းကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့လား..” “ဟင့်အင်း အမေ..သူ သိတောင်မသိသေးဘူး” “ဟင်..ဟုတ်လား ပြောပြောသမီး.. ဘယ်သူလဲ အမေ ကောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီး.. ဒီကိစ္စတာဝန်ယူပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ် …. အမေတို့ သားအမိအရှက်တကွဲအကျိုးနည်း မဖြစ်ခင်လေး..” “ဟင့် ဟင့် ဟီးအဟီး..” မိအေး ငိုသာငိုနေလေတော့သည်။ “ငိုနေလို့ မပြီးဘူးသမီး အမေတို့သားအမိ ဒီရွာလေးမှာ ပန်းစိုက်ရောင်းပြီး.. ရိုးရိုးသားသားနေလာခဲ့တာ…. မုဆိုးမသမီးဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တာတော့.. အမေမခံဘူး … Read more
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး
December 9, 2020 by Padaethar
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါရှိတယ်….. မင်္ဂလာဦင်္း ည မှာ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယ အိမ်ထောင် ကျတော့ရော…” “ဒုတိယ ယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေး … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျို စစ်မစစ် သိအောင်လုပ်နည်း
December 4, 2020 by Padaethar
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျို စစ်မစစ် သိအောင် လုပ်နည်း “မိန်းခေး တစ်ယောက် အပျို စစ် မစစ် သိအောင် လုပ်နည်း” (၁) မင်းမှာ ရည်းစား ရှိရမယ် …။ ( သူများကို စမ်းသပ်ရင် ပါးရိုက် ခံရမှာပေါ့ ) (၂) ရေဇလုံ ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံးထဲမှာ ရေထည့်ပါ …။ သင့်ရဲ့ ရည်းစားကို အဲ့ရေထဲ ထိုင်ခိုင်းပါ …။ (ကိုယ် တုံးလုံးကြီး နဲ့တော့ မထိုင်ခိုင်းနဲ့ အအေးပတ်မယ်) (၃) ထိုင်နေတဲ့ အချိန် ရေကို ကြည့်ပါ …။ ရေက ငြိမ်နေလား …။ ဒါမှမဟုတ် ဘောလုံးလေးတွေ ထွက်နေလာ ဆိုတာ ( စက်ဘီးကျွတ် ဖာသလို … Read more
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ…
November 24, 2020 by Padaethar
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ… နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ….ရမ်းကုတယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် …..ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ….. အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန်….. တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို ပညာစမ်းချင်လို့ သူ့သမီးလေးကိုခေါ်သွားပြီး….. ” ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ …..အာ့နဲ့ နောက်ရက်မှာတခါထပ်သွားတယ်” ဆရာ ကျွန်မနူံးညောင်းပြီး ခေါင်းမကြည်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ ….. မတ်မတ်လည်း သိပ်တော့မကျေနပ်သေးဘူး ….ဒီရမ်းကု ဘာမီတွန်ဆေးပေးလို့မရအောင် ဘာရောဂါလို့ပြောရမလဲ အသည်းသန်စဉ်းစားနေရတာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာသွားတယ်…. အဲ ! စဉ်းစားလို့ရပြီဆိုတဲ့နေ့ကျတော့… ဒေါက်တာဘာမီတွန်ရဲ့ဆေးခန်းထဲကိုရင်ကော့ဝင်သွားတယ်…. … Read more
ငွေထည့်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ငွေတန်ဖိုးရဲ့အဆ တစ်ထောင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ သူတောင်းစားရဲ့လုပ်ရပ်
November 20, 2020 by Padaethar
ငှထေညျ့ခဲ့တဲ့သူတှကေို ငှတေနျဖိုးရဲ့အဆ တဈထောငျပွနျပေးခဲ့ သူတောငျးစားလုပျရပျ တဈနကေ့စြေးထဲ မှာ သူတောငျးစား တဈယောကျ တောငျးစားနတောတှမေိ့တယျ။ သူတောငျးစားနပေုံက ထူးခွားနတေယျ။ “အဈကိုကွီး အဈမကွီးတို့ရယျ သနားကွပါနျော…ပိုကျဆံလေးမြား ထညျ့ပွီးရငျ လိပျစာလေးပါ ပေးခဲ့ပါ” သူ့ ရှမှေ့ာ ခထြားတဲ့ ခှကျ ထဲကို ပိုကျဆံလာထညျ့ကွတဲ့ လူတိုငျးရဲ့ လိပျစာကို မေးပွီး စာအုပျတဈအုပျနဲ့မှတျနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတျောတျောမြားမြားက အိမျအထိမြား လာတောငျးမလားဆိုတဲ့အတှေးနဲသူ့ခှကျထဲကို ဘာပိုကျဆံမှ ထညျ့မသှားကွဘူး။ တဈခြို့ကတော့ သနားတာနဲ့ထညျ့သှားကွတာပေါ့ဗြာ။သိပျမကွာပါဘူး… သူက ခှကျကို သိမျးပွီး ခုနက ခှကျထဲ ပိုကျဆံထညျ့သှားတဲ့ သူတှရေဲ့ အိမျတှကေိုအပငျပနျးခံ ပွီး သူတို့ထညျ့ခဲ့တဲ့ငှတေနျဖိုး ရဲ့အ ဆ ၁၀၀၀ ကို လိုကျပေးတယျ။ အဲ့ဒီ သတငျးက စြေးထဲမှာ ခကျြခငျြးပြံ့သှားတာပေါ့။ သူ့ကိုလညျးလူတှကေဝဖေနျကွတယျ။ … Read more
မရယ်ပဲ… နေနိုင်တယ်လို့.. အာမခံရဲရင် ရှဲယူပြီး ပုံလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်လေ…
November 14, 2020 by Padaethar
မရယ်ဘူးဟုအာမခံမှဖတ်ပါ လူသုံးယောက် သင်္ဘောတစင်းစီးပြီး ခရီးထွက်လာကြတယ်…. သဘောင်္ ကလမ်းမှာပျက်သွားတယ်….. သူတို့သဘောင်္ပျက်သွားတဲ့နားက ကျွန်းက လူသားစားတဲ့ လူရိုင်းတွေနေတဲ့ကျွန်း……… လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- မင်းတို့သုံးယောက်ကို သတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်…. လူသုံးယောက်- မလုပ်ပါနဲ့…ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပေးပါ့မယ်….. အသက်တော့ ချမ်းသာပေးပါ………. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- ဒါဆို မင်းတို့ကိုနာရီဝက် အချိန်ပေးမယ်….. အမျိုးတူအသီး(၁၀)လုံးယူလာခဲ့ကြ၊ဒါဆိုရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်…. အဲဒီ့တဆင့် အောင်မြင်သွားရင် နောက်တဆင့်ထပ်ခိုင်းမယ်…. အဲ့ဒါပါ လုပ်နိုင်ရင် မင်းတို့မြို့ကို ပြန်တဲ့လမ်းပြပေးမယ်၊ညွှန်ပေးလိုက်မယ်။ (၁၅)မိနစ်ခန့်အကြာ………… ပထမလူ- ပန်းသီး(၁၀)လုံးနဲ့ပြန်လာတယ်…. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်-ကဲမင်းက ပထမအဆင့်တော့ အောင်သွားပြီ…. ဒုတိယအဆင့်ကို ခိုင်းမယ်၊ မင်းယူလာတဲ့အသီး(၁၀)လုံးကို တလုံးချင်းစီ ဖင်ထဲထည့်ရမယ်။ ထည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမငိုရ၊မရယ်ရ မမဲ့ရ…..မအော်ရ၊အမူရာမပျက်ရဘူး…. တကယ့်လို့အမူရာ ပျက်ခဲ့ရင် မင်းကိုသတ်မယ်….. မပျက်ရင်တော့ မင်းပြန်လိုတဲ့လမ်းကိုညွန်မယ်….. ပထမလူ- ပန်းသီး(၅)လုံးမြောက်မှာ မျက်နှာမဲ့သွားတယ်….. လူရိုင်းခေါင်ဆောင်- သတ်စေ………… (၂၅)မိနစ်ခန့်ကြာသော်……. ဒုတိယလူ- ညောင်သီး(၁၀)လုံးနဲ့ … Read more
ဟိုတယ်​ အခန်းနံပါတ်​ ၃၉ ( မိန်းခ​လေးများ မဖတ်​ရ )
ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ် အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား….. boss – အားပါတယ်ဗျ…. man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား….. boss – ရတာပေါ့ဗျ…. man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ….. လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် ကွန်ဒုံး (၃)ခုရယ် ဓားမြှောင်( ၆ )ချောင်းရယ်…. လက်ဖက်ရည် (၂ )ခွက်ရယ် ရနိုင်မလားလို့ သူဌေးကိုမေးတယ်။ သူဌေးကလဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူအနဲငယ် အံသြသွားပြီး စိတ်ရှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ လူငယ်ကို မေးစရာတွေရှိလာတယ်။ လူငယ်ကအခန်းကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် … Read more
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္း ည မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ …. အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယ အိမ်ထောင် ကျတော့ရော…” “ဒုတိယ ယူတဲ့ … Read more
ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်…..
November 4, 2020 by Padaethar
ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်….. ကျနော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မှားခဲ့တယ်။ ၀န်ခံပါတယ်… သူ့ဘက်ကမမှားဘူး ကျနော့ဘက်ကမှားခဲ့တာပါ။ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်အမှားကို တာဝန်ယူရဲရမှာပေါ့ ။ကျနော့ အမှားအတွက် တာဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီနေ့က ပေါ့ ။ ကောင်းကင်တစ်ခွင်စစ်ခင်းနေသည့်အလား လျှပ်စီးကြောင်းများကလက်နက်ခဲယမ်းများပစ်ဖောက်နေသလို လက်ခနဲလက်ခနဲ အားမာန်အပြည့်နဲ့ငြာသံပေးလို့ ၊ပြိုကျတော့မယောင် မိုးသားတွေက တစ်ရွေ့ရွေ့ နဲ့ ဒေါသတွေကိုမြိုသိပ်ပြီး …. အမျက်ခြောင်းခြောင်းထွက်လို့ ဘယ်အချိန်ဖောက်ခွဲပစ်ရမလဲဆိုတာ ဉာဏ်မီသရွေ့ ကောက်ကျစ်ဖို့စဉ်းစားနေလေရဲ့ ။ လူသွားလူလာများဖြင့်စည်ကားလေ့ရှိတဲ့ရွာလယ်လမ်းမမှာတော့ ရွံ့ဗွက်တွေနေရာအတော်များများကိုကြီးစိုးထားလို့လား …. အငြိုးတစ်ကြီးရွာချပစ်နိုင်ခြေများတဲ့ ဆည်းဆာဖျက်မိုးကိုစိုးရိမ်နေလို့လားမသိ ခွေးလေခွေးလွင့် မှတစ်ပါး လူသွားလူလာကင်းရှင်းနေသည်။ ဖိနပ်နှစ်ဖက်လက်မှာကိုင် ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ပြီး ရွံ့ဗွက်အသွယ်သွယ်ကို သိုင်းနင်းကွက်ကျကျော်ဖြတ်လိုက်…. လိုရာမရောက်သောဒယီးဒယိုင်ခြေလှမ်းများကြောင့် ဗွက်ထဲချော်ကျလိုက်ဖြင့် လမ်းတစ်လျှောက်ခွေးလေ ခွေးလွင့်တွေကြားမှာ ကျနော်တစ်ယောက် popular ကိုဖြစ်လို့။လူပျိုလှည့်ရင်ဝတ်ဖို့ တစ်နေ့ကမှဝယ်ပြီးခါစ ယောပုဆိုးနဲ့ …. … Read more
ညီမ စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရတော့လို့ပါ အကိုရယ်…
October 28, 2020 by Padaethar
သာအောင်က ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ မောင်းသမားပေါ့။လူပျို ကြီး တစ်ကိုယ်တည်းသမား။ တစ်ရက် တွက်ခြေမကိုက်သေးတော့ မိုးချုပ် တဲ့ အထိ ဆွဲနေတာ။ ည ၁၁ နာရီလောက် ခရီးသည် ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို သွားပို့ပေးရတယ်။သွားတဲ့ လမ်းကချောင်ကျကျ ပဲ၊ သွားနေရင်း လမ်းတစ်ဝက်အရောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကလှမ်းတားတယ်ဗျ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုင်ကယ် ကို ကောင်မလေး ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး က ”အကို ကျမ ကိုလိုက်ပို့ပေးပါလား ” “ရတာပေါ့ ညီမ က ဘယ်ကိုသွားချင်လို့လဲ ” “ခြေဦးတည့်ရာ တစ်နေရာကို သွားချင်တယ်။ ကျသင့်သလောက်ကို ပေးမှာပါ ” ” ဟာ အကို ကျနော့် အိမ် မရောက်သေးဘူးလေ ” … Read more
ယောကျာ်းလေးတိုင်း သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူအပေါ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်တတ်တဲ့အရာများ February 25, 2021
သင့်မှာ မကြာခဏ တွဲလိုက် ပြတ်လိုက် အချစ်ရေး ရှိနေတာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ February 25, 2021
ကိုကို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး နဲ့၊ မောင် လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးကြားက ခြားနားချက်များ February 25, 2021
ရန်ဖြစ်တိုင်း စတောင်းပန်တတ်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ February 25, 2021
ကိုယ်ကြိတ်ခိုက်ရတဲ့ကောင်လေး ကိုယ့်အပေါ်နှစ်သက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၁) ခု February 25, 2021
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အချစ်ရေးကံမကောင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက်….. February 25, 2021
အဝေးမှာရှိတဲ့သင့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေကြောင်း သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု…. February 25, 2021